Mutauriri magnets a - China Ningbo Sine
Mutauriri Magnet Mutauriri magnets A Manufacturer Sine Magnetic Company Limited mutauri magnets A ndivo mukuru zita nokuda zvachose magnets a yaishandiswa nemasipika, vakurukuri uye pamahedhifoni. Magnets A ndiwo anokosha zvikamu mhando iyi kakawanda. Rinotibatsira zvechigarire remagineti nokuda Coil ari mukurukuri, nokukurumidza rakatumbuka vatungamirire kuitika kunounza cône vibrating neshure, uye ipapo okuteerera chiratidzo chinobuda mutauri. The magnets a akashandiswa vakurukuri uye pamahedhifoni vari M ...
Mutauriri magnets aManufacturer Sine Magnetic Company Limited
Mutauriri magnets A ndiwo mukuru zita nokuda zvachose magnets a yaishandiswa nemasipika, vakurukuri uye pamahedhifoni. Magnets A ndiwo anokosha zvikamu mhando iyi kakawanda. Rinotibatsira zvechigarire remagineti nokuda Coil ari mukurukuri, nokukurumidza rakatumbuka vatungamirire kuitika kunounza cône vibrating neshure, uye ipapo okuteerera chiratidzo chinobuda mutauri.
The magnets a akashandiswa vakurukuri uye pamahedhifoni vari kunyanya neodymium magnets a uye ferrite magnets a . Ivo zvinoumbwa mu mhete kana Disc kuti hukuru siyana. Ferrite magnets a Anonyanyowanika kushandiswa pasi magumo uye zvakachipa nemasipika uye pamahedhifoni. Matauriro Unhu hakuna kunaka zvakakwana. Kazhinji Ferrite mutauri magnets a vari zvindori guru hukuru pamusoro D72xd32x15mm, D60xd24x13mm, D90xd36x17mm, D90xd36x15mm, D36xd18x8mm, D80 X d40 X 10mm, D80x d40 X 15mm, D90 X d50 X 15mm, D110x d60 X 15mm, D110 X d60 X 17mm, D110 X d60 X 18mm uye etc.
Nepo neodymium zvachose magnets a vari kakawanda kushandiswa svikiro uye mugiredhi dzakakwirira pamahedhifoni. Matauriro unhu wakanaka, inzwi elasticity zviri nani, izwi yakanaka kuita uye Positioning nokurira Munda yakarurama. Vane kuita, duku kadikidiki uye chiedza neodymium magnets a anogona bvikinyidza huru kadikidiki inoremerwa ferrite magnets a mune dzimwe mafomu zvishoma nezvishoma.
Yaiwanzoshandiswa hukuru pamusoro neodymium mutauri magnets a vari D50x12mm, D50x10mm, D6x1mm, D6x1.5mm, D6x5mm, D6.5 × 1.5mm, D6xd2x1.5mm, D12x1.5mm, D12.5 × 1.2mm uye zvichingodaro. A siyana hukuru hunogona customized sezvo paminiti vatengi uye vanoshandisa 'zvinodiwa.
Previous: Motor jenareta magnets a
Levitating Makaralı Nomukurukuri